Nayakhabar.com: तपाईको छाला फुस्रो छ ? उपनाउनुस् यी ४ टिप्स
काठमाडौं । ब्युटिसियन एलिसा लेप्चा, जाडोमा अधिकांशको समस्या हुन्छ, छाला फुस्रो हुने । तुलनात्मक रूपमा सुक्खा छाला भएकालाई जाडोमा यो समस्याले झन् बढी सताउँछ । चिल्लो छाला हुनेलाई पनि नुहाएपछि छाला फुस्रो हुने खतरा निम्तिन सक्छ । त्यसो भए जाडोमा छाला फुस्रो हुनबाट कसरी जोगिने ? कस्ता कुरामा ध्यान दिन सके छालाको कोमलता र चिल्लोपन कायम राख्न सकिएला, महिला र पुरुष दुवैलाई उपयोगी हुने चार आइटमबारे ब्युटिसियन एलिसा लेप्चाले जानकारी दिएकी छिन्ः